File msvcp71.dll maka Windows 7
Akụkụ a na-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi budata msvcp71.dll maka n'efu ma ọ bụrụ na mmalite nke egwuregwu ahụ (dịka ọmụmaatụ, Titan Quest) ma ọ bụ usoro ihe omume ahụ ị na-ahụ ozi na-ekwupụta na anaghị achọta faịlụ ahụ ma ọ bụ na enweghi na kọmputa. Leekwa: budata msvcr71.dll maka Windows Mbụ - ị gaghị ewepụ faịlụ a site na saịtị dị iche iche nke DLL collection collections - ọ nwere ike ịdị ize ndụ na, ọzọ, ọbụlagodi na ị budata msvcp71.
Kọmputa na-eti mkpu mgbe agbanwuru
Kọmputa anaghị amalite ma usoro usoro a na-ada ụda magburu onwe ya mgbe a gbanwere ike ahụ? Ma ọ bụ ka nbudata ahụ na-eme, ma ọ nwere ihe ọhụụ dị iche? N'ikpeazụ, nke a adịghị njọ; enwere ike inwe nsogbu karịa ma ọ bụrụ na kọmputa agbanyeghi n'enyeghị ama ọ bụla ma ọlị. Ihe e kwuru n'elu bụ akara BIOS nke na-agwa onye ọrụ ma ọ bụ ọkachamara nrụpụta kọmputa nke ihe ọrụ kọmputa nwere nsogbu, nke na-eme ka ọ dị mfe iji chọpụta nsogbu na idozi ha.
Akaụntụ Kọmputa - ma ịzụta
Ogologo ụlọ ahịa ọ bụla ebe ị nwere ike ịzụta kọmputa na-enye ụdị mmemme ego dị iche iche. Imirikiti ụlọ ahịa na ntanetị na-enye ohere ịzụta kọmputa n'ekwe ntị n'ịntanetị. Mgbe ụfọdụ, ike ịzụta dị otú a dị mma - ị nwere ike ịchọta ego n'echeghị ụgwọ ọ bụla na ịkwụ ụgwọ, na okwu ndị dị gị mma.
Ịwụnye Ubuntu site na USB flash drive
Dị ka ihe atụ, ị kpebiri ịwụnye Ubuntu na kọmputa gị na maka ihe ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, n'ihi enweghị ntụpọ efu ma ọ bụ ụgbọala maka ikesa akwụkwọ, ịchọrọ iji ngwa USB nwere ike ịkwanye. Ok, Aga m enyere gị aka. N'ime ntuziaka a, a ga-atụle usoro ndị a iji mee: ịmepụta Ubuntu Linux installation flash drive, wụnye bọtịnụ site na USB flash drive na BIOS nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, na-etinye sistemụ arụmọrụ na kọmputa dịka osụọrụ abụọ ma ọ bụ isi.
Ịtọzi ma rụkwaa kọmputa n'onwe ha: ntụziaka kachasị ewu ewu
Windows Windows XP Windows 7 Windows 8 Windows sistemụ arụmọrụ. Ntuziaka zuru ezu na ihe nkuzi maka ntinye, ọrụ, nyocha nsogbu na sistemụ arụmọrụ Windows. Ihe ndị dị mkpa, ntinye site na windo mbanye, ihe ndị bụ isi nke ọrụ, ịmara Windows 8 na ihe ndị ọzọ. Google Android Olee otú ị ga-esi mepee igodo dị na Android Olee otú ị ga-esi wụnye Adobe Flash Player na gam akporo 4 Otu esi achọpụta ekwentị ma ọ bụ mbadamba ụrọ ma ọ bụ zuru ezu nke Akwụkwọ ntuziaka maka ndị ọrụ nke smartphones na mbadamba na-arụ ọrụ arụmọrụ nke Google Android nke ga-eji oge ndị a nwere uru dị ukwuu, mmasị na arụmọrụ ngwaọrụ.
Na kọntaktị - ihe ngwọta nke nsogbu ugboro ugboro
Nke a nwere ihe niile nke saịtị ebe ị nwere ike ịchọta ngwọta maka nsogbu ndị na-emekarị ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta Vkontakte. A na-emelite ndepụta nke ntuziaka ka edere ha ma ọ bụ ọnọdụ ọhụrụ na ibe ndị ọrụ VK. Enweghị m ike ịbanye - ọnọdụ kachasịsị bụ mgbe onye ọrụ enweghị ike ịbanye na profaịlụ VC ya ma hụ ozi na-ekwupụta na e gbochire ibe ahụ maka nrutuaka nke hacking.
Ebe ịzụta eriri VGA HDMI (nkwụnye)
Ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya nweta akwụkwọ ọgụgụ isi dịka ngwá ọrụ kachasị mma. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị nwere ike jikọọ ihe ngosi VGA ma ọ bụ ihe nyochaa na ihe eji ederede, nke a na-eji naanị PortMI port. N'ihi ya, m gbaara nsogbu dị otú ahụ. Lee kwa: Otu esi ejikọ laptọọpụ na TV site na HDMI, VGA ma ọ bụ Wi-Fi.
Ụzọ kachasị mma isi mee ka ndị ọrụ ibe gị na ndị ezinụlọ gị nwee kọmputa
N'isiokwu a Agaghị m ede ihe ọ bụla gbasara esi edozi OS ma ọ bụ na-emeso nje virus, ka mma karịa ihe dị egwu, ya bụ ihe kasị mma, n'echiche m, njakịrị ndị nwere ike itinye n'ọrụ na iji kọmputa. Ịdọ aka ná ntị: ọ dịghị otu n'ime omume ndị a kọwara n'isiokwu a ga-emerụ kọmputa ahụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na onye egwuregwu ahụ adịghị aghọta ihe na-eme, kpebie ịtinye Windows ma ọ bụ ihe ọzọ iji dozie ihe ọ na-ahụ na ihuenyo. mgbe ahụ, nke a nwere ike ibute nsogbu ndị na-adịghị mma.
Gụpụta ma ọ bụ ịzụta kọmputa - nke dị mma ma dịkwa ọnụ ala?
Mgbe achọrọ kọmputa ọhụrụ, enwere nhọrọ abụọ maka inweta ya - ịzụta otu njikere ma ọ bụ dozie otu n'ime components ndị dị mkpa. Nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a nwere ụdị ọdịiche ya - dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịzụta PC dị na netwọk nkesa ma ọ bụ usoro usoro na ụlọ ahịa kọmputa.
Nzuzo na Usoro eji
M na-agwa gị ka ị mara onwe gị na iwu nzuzo nke saịtị https://remontka.pro. Site na iji weebụsaịtị remontka.pro, ị kwenyere na iwu nzuzo nzuzo. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'ihe ọ bụla, biko zere iji saịtị ahụ. Mgbe ị bipụtara ihe na saịtị ahụ, iji chebe megide spam na omume na-akwadoghị nke ndị ọrụ, nakwa maka nzaghachi site na ha, aha njirimara ị ezipụta nwere ike ịchekwa na nchekwa data (aha ọ bụla nwere ike iji, gụnyere "apụ"), adreesị ozi-e na Adreesị IP nke onye ọrụ.
Otu esi eme usoro ihe eji eme ihe
Nkesa nke cores processor maka ịmepụta usoro ihe omume nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na kọmputa gị nwere ngwa ngwa-ngwa ngwa nke a na-apụghị ịgbanwụrụ, nke na-emetụkwa na arụmọrụ nkịtị nke kọmputa. Dịka ọmụmaatụ, site na ịhọrọ otu isi ihe nhazi maka Kaspersky Anti-Virus na-arụ ọrụ, anyị nwere ike, n'agbanyeghị na ọ dị ntakịrị, ma na-agba ọsọ ahụ na FPS na ya.
12/23/2012 Maka beginners | internet | Kedu ihe bụ Skype? Skype (Skype) na-enye gị ohere ime ọtụtụ ihe, dịka ọmụmaatụ - iji soro ndị ikwu gị na ndị enyi gị nọ na mba ọzọ na-ekwurịta okwu n'efu. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iji Skype maka oku na-agagharị na ekwentị na-akwụ ụgwọ na ọnụahịa ndị dị ala karịa ndị a na-eji maka oku ekwentị.
Akwụkwọ ahụ nwere ihe niile gbasara mgbake data site na diski ike, draịvụlị, kaadị ebe nchekwa na ngwaọrụ Android na saịtị remontka.pro. A kọwara atụmatụ ịkwụ ụgwọ na n'efu maka nchịkọta data, ụfọdụ mgbakwunye ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji weghachite faịlụ na ozi ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịhazi, nhichapụ, ma ọ bụ ịkwanye arụmọrụ.
Nnyefe nke Amazon na Russia - ahụmahụ onwe onye
N'ihe dị ka otu izu gara aga na Intanet ebe a na-ezute ozi ọma na Amazon malitere inye ngwá ọrụ ngwá ọrụ na Russia. Ntak ị gaghị ahụ ihe na-adọrọ mmasị n'ebe ahụ, echere m. Tupu nke a, ana m enye iwu site n'aka ụlọ ahịa ndị dị na China na Russian, ma anaghị m agakwuru Amazon.
Ụmụ klas - nchọpụta nsogbu na ntụziaka ndị ọzọ
Ibe akwukwo a nwere ihe nile nke saịtị ahu nke metutara idozi nsogbu ya na ndi nkiti ibe netwọk. Anyị na-ele ma ihe kachasị ha anya, na arụmọrụ bụ isi nke nwere ike isiri onye ọrụ novice ike: dịka ọmụmaatụ, na-agbanwe paswọọdụ. Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Odnoklassniki adịghị emeghe - ntụziaka dị mfe nke na - enye gị ohere ịhazigharị ọnọdụ ahụ ozugbo, mgbe ị na - abanye na peeji nke, na - ede na a gbochire ya na ịchọrọ na hacking, ịkwesịrị itinye nọmba ekwentị iji mee ka profaịlụ ma ọ bụ zipu SMS na mkpirikpi.
Kọmputa na - eme mkpọtụ - ihe ị ga - eme?
Isiokwu a ga-ekwu banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na kọmputa desktọọpụ gị dị jụụ ma na-akụ, dị ka onye na-ehichapụ ọkụ, crackles ma ọ bụ rattles. Agaghị m ejedebe naanị otu ihe - ihichapu kọmputa site n'ájá, ọ bụ ezie na ọ bụ isi: ka anyị kọọkwa otu esi etinye mmanu na-agba, ihe kpatara diski ike nwere ike ịgbawa na ebe ụda ígwè ahụ na-abịa.
Esi ebudata d3dcompiler_43.dll na ụdị faịlụ
Ọ bụrụ na mmalite egwuregwu ọ bụla, dịka Agha ma ọ bụ Watch Dogs, njehie na-egosi na mmalite nke usoro ihe a agaghị ekwe omume, n'ihi na faịlụ d3dcompiler_43.dll adịghị na kọmputa, m ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi ebudata faịlụ a n'onwe m na kọmputa ma wụnye ya, yana ụdị faịlụ ọ bụ (n'eziokwu, site na nke a, ị ga-amalite ịhazigharị njehie ahụ).
Kọmputa arụkwa na Samara
A na-ahọrọ "ezigbo" ụlọ ọrụ mmezi kọmputa na obodo Samara. Nhọrọ maka nhọrọ dị mfe: achọrọ Google search, a na-ajụ ajụjụ "Ndozi kọmputa na Samara", agbasaghị mgbasa ozi, nyocha na ozi na saịtị ahụ nyochaa, dabere na ahụmịhe onwe gị na òtù ọrụ enyemaka kọmputa dị iche iche.